1000W Fekitori - China 1000W Vagadziri uye Vatengesi
lab 1000W ultrasound yekuongorora homogenizer
Ultrasonic homogenizing inzira yemuchina yekudzikisa zvidiki zvidiki mumvura kuitira kuti zvigoita zvakaenzana zvidiki uye zvakaenzana zvakagoverwa. Kana ma ultrasonic processors achishandiswa se homogenizers, chinangwa ndechekuderedza zvidimbu zvidiki mumvura kuti uvandudze kufanana uye kugadzikana. Izvi zvidimbu (zvinopararira chikamu) zvinogona kunge zviri zvakaomarara kana zvinwiwa. Kuderedzwa kwehuremu hwepakati hwezvimedu kunowedzera huwandu hwezvimwe zvikamu. Izvi zvinotungamira pakuderedzwa kwepakati par ...
Iko kusanganiswa kwehupfu kuva zvinwiwa idanho rakajairika mukuumbwa kwezvinhu zvakasiyana, senge pendi, ingi, shampoo, zvinwiwa, kana kupora media. Iwo ega ma PARTICIPLE anobatwa pamwechete neakwezva masimba eakasiyana epanyama uye emakemikari maitiro, anosanganisira van der Waals mauto uye mvura pamusoro pekupokana. Mhedzisiro iyi yakasimba kune yakakwira viscosity zvinwiwa, senge ma polymers kana resini. Iwo anokwezva mauto anofanirwa kukundwa kuitira kuti deagglomerate uye nekuparadzira iwo ma particles mu li ...
Iyi lab ultrasonic homogenizer ine simba re1000w uye inogona kugadzira kusvika pa2500ml nguva imwe neimwe. Iyo inokodzera mhinduro dzakasiyana siyana uye inobatsira kukurumidza kuwana dzakasiyana data rekuyedza.